केएल राहूल नयाँ कीर्तिमान नजिक, बन्न सक्छन् भारतका लागि यस्तो गर्ने पहिलो! – Everest Dainik – News from Nepal
केएल राहूल नयाँ कीर्तिमान नजिक, बन्न सक्छन् भारतका लागि यस्तो गर्ने पहिलो!
काठमाडौंः भारतीय क्रिकेट टीमका ओपनर तथा विकेटकीपर केएल राहूल पछिल्लो समय शानदार लयमा देखिएका छन् । उनको ब्याटबाट लगातार अर्धशतक आइरहेको छ । र, राहूल टीमलाई जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । उनी न्यूजिल्याण्डसँगको टी–२० सिरिजमा पनि शानदार लयमा छन् ।
केएलले जारी सिरिजमा लगातार २ खेलमा अर्धशतक बनाएका छन् । योसँगै उनी टी–२० मा लगातार तेस्रो अर्धशतक पूरा गर्ने ब्याट्सम्यान बनेका छन् । यसअघि राहूलले श्रीलंका विरुद्धको टी–२० सिरिजको अन्तिम खेलमा पनि अर्धशतक बनाएका थिए ।
यदि आज पनि उनले अर्धशतक बनाउन सके नयाँ भारतका लागि कीर्तिमान बनाउने छन् । आज अर्धशतक बनाउन सके केएल भारतका लागि टी–२० मा लगातार सर्बाधिक अर्धशतक बनाउने पहिलो क्रिकेटर बन्ने छन् । हालसम्म टी–२० मा भारतका लागि कप्तान विराट कोहली र रोहित शर्माले पनि लगातार समान तीन अर्धशतक बनाएका छन् ।
लगातार ४ टी–२० मा अर्धशतक बनाउने खेलाडी
टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय म्याचमा लगातार ४ अर्धशतक बनाउने खेलाडीको सूचीमा मात्र २ जना छन् । यो सूचीमा न्यूजिल्याण्ड क्रिकेट टीमका पूर्वकप्तान ब्रेण्डन म्याक्लम र वेष्ट इन्डिजका क्रिस गेल मात्र छन् । यदि आज राहूलले पनि अर्धशतक बनाउन सके उनी पनि यो सूचीमा अटाउने छन् ।
विराटले तोड्न सक्छन् तीन कीर्तिमान
भारतीय क्रिकेट टीमका कप्तान विराट कोहलीले एकपछि अर्को कीर्तिमान बनाइरहेका छन् । विश्व क्रिकेटका चर्चित कप्तान विराटले आज फेरि केही कीर्तिमान आफ्नो नाममा बनाउने सम्भावना बढेको छ । यदि उनले आजको म्याचमा २५ रन बनाउन सके पूर्वकप्तान महेन्द्रसिंह धोनीको रेकर्ड भंग गर्ने छन् ।
भारतका लागि टी–२० मा कप्तानका रुपमा सर्बाधिक रन बनाउने खेलाडीको सूचीमा अहिले धोनी शीर्ष स्थानमा छन् । उनले टी–२० मा कप्तानका रुपमा १ हजार एक सय १२ रन बनाएका छन् ।
यो सूचीमा दक्षिण अफ्रिकाका कप्तान फाफ डुप्लेसिस शीर्ष स्थानमा छन् । उनले कप्तानका रुपमा टी–२० मा १२ सय ७३ रन बनाएका छन् । यस्तै न्यूजिल्याण्डका कप्तान केन विलियिम्सन (११४८) दोस्रो र धोनी (१११२) तेस्रो स्थानमा छन् ।
सर्बाधिक अर्धशतक बनाउने वर्तमान कप्तान!
बुधबार विराटले सर्बाधिक अर्धशतक बनाउने वर्तमान कप्तानको कीर्तिमान बनाउने सम्भावना पनि बलियो छ । यदि सिरिजको तेस्रो खेलमा अर्धशतक बनाउन सके विराटले केन विलियम्सन र फाफ डुप्लेसिसलाई पछि पार्ने छन् । अहिलेसम्म यी तीनै कप्तानले समान ८ अर्धशतक बनाएका छन् ।
सर्बाधिक छक्का प्रहार गर्ने दोस्रो कप्तान!
विराटले बुधबार सर्बाधिक छक्का प्रहार गर्ने कप्तानको सूचीमा दोस्रो स्थानमा उक्लिने सम्भावना पनि छ । यदि उनले ७ छक्का प्रहार गर्नसके टी–२० मा सर्बाधिक छक्का प्रहार गर्ने वर्तमान कप्तानको सूचीमा विराट दोस्रो स्थानमा उक्लिने सम्भावना बढेको हो । उनी बुधबार ७ छक्का प्रहार गरे टी–२० मा ५० अर्धशतक पूरा गर्ने दोस्रो कप्तान बन्ने छन् । यो सूचीको शीर्ष स्थानमा इंग्ल्याण्डका टी–२० कप्तान इओन मोर्गन छन् ।
ट्याग्स: केएल राहूल, नयाँ कीर्तिमान, भारत, विकेटकीपर
बाँस्कोटाले कर्मचारीमाथि प्रयोग गरेका अश्लिल शब्दहरूप्रति ट्रेड युनियनको आपत्ति
टर्कीमा ५.७ म्याग्निच्यूडको भूकम्प
पृथ्वी राजमार्गमा दुई बस ठोक्किए, ४० घाइते
‘सेन्टी भाइरस’काे आक्रामक व्यापार, दुई दिनमा कति कमायो ?
बाँस्कोटालाई कारवाही गर्न माग गर्दै अख्तियारमा निवेदन (पूर्ण पाठसहित)
श्रीमान् विदेश हुँदा गर्भवती ! भन्छिन्, ‘सपनामा आउने गर्थे श्रीमान्’